नेपालमा पहिलो प्रिन्टिङ ईकमर्स शुरु, प्रिन्टसेवाले थाल्यो काम - Rojgar Manch
नेपालमा पहिलो प्रिन्टिङ ईकमर्स शुरु, प्रिन्टसेवाले थाल्यो काम
लकडाउन र निषेधाआज्ञामा समेत काम गर्नका लागि डिजिटल बजारलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा पहिलो पल्ट प्रिन्टिङ ईकमर्स शुरु भएको छ ।
विगत १५ बर्षदेखि डिजाईन र प्रिन्टिङ क्षेत्रमा काम गर्दै आएको प्रिन्टसेवा प्रालिले साउनदेखि प्रिन्टिङ इकमर्सको सुविधा सार्वजनिक गरेको हो ।
कम्पनीले प्रिन्टिङ ईकमर्स वेबसाईट र एप्लीकेसनको सार्वजानिक गरी सेवा विस्तार गरी सकेको प्रिन्टसेवाका सिईओ सुरज राईले बताए । यससँगै अब प्रिन्टसम्बन्धी सम्पूर्ण काम अनलाईनबाटै हुने पहिलो कम्पनी भएको छ ।
अनलाईनमार्फत प्रिन्टिङ सेवा शूरु भएसँगै ग्राहकले अब समय र पैसा दुवैको वचत गर्न सक्ने कम्पनीको विस्वास छ । ग्राहकले प्रिन्टसेवामार्फत आफुले चाहेको प्रोडक्टको डिजाईन समेत आफैले गर्न सक्नेछन् । जसको लागि कम्पनीले वेबसाईटमा बिभिन्न टेम्प्लेटहरु उपलब्ध गराउनेछ । ग्राहकले अनलाईनबाटै आफ्नो अर्डरको ट्रयाकिङ र रि–अर्डर समेत गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
प्रिन्टसेवा मार्फत कागज, प्लाष्टिक, धातु, कपडा, रेग्जिन लगायतका सामाग्रीमा ३० भन्दा बढि मिडियाको प्रयोग गरी प्रोडक्ट तयार गर्न सकिने संचालक तथा सिईओ राईको भनाई छ ।‘अबदेखि घर, कार्यालय तथा अन्य निजी र व्यवसायिक प्रयोजनको लागि जस्तोसुकै प्रिन्टिङको कामको लागि डिजाईन हाउस र प्रिन्टिङ कार्यालय धाउनु पर्ने समस्या र झन्झटिलो प्रकृयाको अन्त्य भएको छ’ राईको दावी छ ।
प्रिन्टसेवाको शुरुवाती दिनमै ग्राहकहरुको उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाएको सेवा आरम्भ गरेसँगै ग्राहकहरुको अर्डर दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको कम्पनीले जनाएको छ । प्रिन्टसेवाले ग्राहकहरुको सुविधाको लागि देशैभर सिपिङको समेत व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले स्ट्याण्र्डड र एक्प्रेस सिपिङ मार्फत ग्राहकले चाहेको घर, कार्यालाय वा अन्य ठेगानामा सिपिङ् गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रिन्टसेवा के हो ?
हरेक किसिमको छपाई सम्बन्धि काम हुने अनलाइन सर्भिस हो प्रिन्टसेवा डटकम । प्रिन्टसेवाले कागज, प्लास्टिक, मेटल, कपडा, फ्लेक्स, रेग्जिन आदिबाट छपाई गर्छ । प्रिन्टसेवाले ५० भन्दा बढी किसिमको पेपरको प्रयोग गरेर छपाईको काम गर्ने गरेको छ ।
के के काम गर्छ ?
प्रिन्टसेवाले ग्राहकले गरेको अर्डरलाई लोकेसनमा डेलिभरी गर्छ । आफ्नो डिजाइन नभए पनि अनलाइन डिजाइन गरी अर्डर गर्न सकिने अथवा रियल टाइम डिजाइनर हायर गर्न मिल्ने भएकाले प्रिन्टसेवा सहज र ग्राहकका लागि फलदायी हुने बताइएको छ ।
भुक्तानी कसरी ?
प्रिन्टसेवामा जोडिन आफ्नो नाम रजिस्ट्रर गर्न सकिन्छ । रजिस्टरसँगै आकर्षक अफर वा छुट पाउन सकिनेछ । प्रिन्टसेवाले २५ प्रतिशत सुविधा उपलब्ध गराएको र कर्पोरेट खातालाई हरेक आइटममा १० प्रतिशत छुट दिने जनाएको छ ।